Orinasa mpanamboatra kitapo ambany ambany any Sina | Hong Bang
Ny fampifangaroana ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny Quad Seal sy Stand Up Pouch, ny Flat Bottom Bag (fantatra ihany koa amin'ny hoe Box Pouch) dia manana antso ambony eo amin'ny talantalana, ary manatsara ny talantalana sy ny fitoerana fonosana miaraka amin'ny gusset amin'ny endrika ambany baoritra. Kitapo ambany ambany dia mamela ny famenoana ambony mora sy mifanaraka amin'ny fampiharana an-tsena isan-karazany, manomboka amin'ny hazan-dranomasina, kafe ary muesli, ka hatramin'ny vokatra sakafon'ny biby sy ny fambolena.
Endri-javatra amin'ny Flat Bottom Bag
Ny lamination matanjaka matanjaka dia manome henjana tsara ho an'ny fahaleovan-tena tonga lafatra.
Ny gussets marobe dia mamela habaka marika sy endrika famolavolana.
Ny endrika toy ny boaty dia manome fampiasa ambony, na eo amin'ny talantalana na amin'ny fandefasana.
Afaka mampiditra endri-javatra miavaka isan-karazany, toy izany koa ny zipa eo alohan'io azo resahina, ny rantsana, ny lakan-dranomaso mora, ny isa amin'ny laser sns mety ho an'ny vokatra maina, vata fampangatsiahana ary vata fampangatsiahana
Fananan'ny Kitapo ambany
Ny bottombag fisaka dia vokarina avy amina sosona maromaro amin'ny sakana izay azo sokajiana ho vondrona lehibe 3, izay miaraka manome ny paosin'ireo toetra mateza sy maharitra tsy mahazaka puncture. Ireto vondrona 3 ireto dia:
Layer afovoany: Miasa ho toy ny arofanina fiarovana mba hiantohana ny fihazonana ny atin'ny kitapo ho azo antoka sy vaovao.
Ny Pet Food Stand Up Pouch dia mamela ihany koa ireo fiasa azo namboarina toy ny zipper, lavaka ambony, takelaka mandatsa-dranomaso ary varavarankely hanatsarana ny zava-bitany
Ity ny fonosana HONGBANG. Manome vahaolana isan-kitapo fonosana sakafo ho an'ny filàna sy fampiharana samihafa izahay. Lazao anay ny zavatra takianay fa ho hitanay ny karazana filanareo rehetra. Tsy mamokatra vokatra izahay ary manandrana mitarika anao hanaraka azy ireo; mihaino ny filanao sy ny fanavaozana injeniera izahay izay hamaha ny olanao amin'ny fonosana.
Teo aloha: Tombo-kase Vacuum sakafo 10 ″ X 50'- 2 isa
Manaraka: Kitapo ambany sy hijoro